Torohevitra mahasoa 5 amin'ny fomba hisorohana ireo endrika mahazatra indrindra amin'ny heloka an-tserasera | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny cybercriminalité dia manondro ny fisian'ny heloka bevava izay ny Internet dia ampahany manan-danja na ampiasaina hanamora ny famonoana azy. Niely patrana io fironana io tao anatin’ny 20 taona farany. Ny fiantraikan'ny cybercriminalité dia matetika hita fa tsy azo ivalozana ary ireo izay iharan'izany. Na izany aza, misy ny fepetra azonao atao mba hiarovana ny tenanao amin'ny cybercriminals.
Ahoana ny fijanonana ho voaro amin'ny endrika mahazatra indrindra amin'ny cybercrime
Ireto ambany ireto ny fepetra sasany izay afaka manampy anao hiaro anao amin'ny karazana heloka bevava an-tserasera mahazatra indrindra:
Ny fangalarana ny maha-izy azy dia heloka bevava misy ny fampiasana ny mombamomba ny olona iray hanaovana hetsika tsy ara-dalàna. Ity karazana cybercriminalité ity dia mitranga rehefa misy mangalatra ny mombamomba anao manokana ary ampiasain'ny olon-dratsy hahazoana tombony ara-bola.
Ireto ny endrika mahazatra indrindra amin'ny fangalarana ny maha-izy azy:
Fangalarana famantarana ara-bola: fampiasana tsy nahazoana alalana ny carte de crédit, laharan'ny kaontin'ny banky, laharan'ny fiahiana ara-tsosialy, sns.
Fangalarana maha-olona: mampiasa ny mombamomba anao manokana hanaovana hetsika tsy ara-dalàna toy ny fanokafana kaonty mailaka sy fividianana zavatra an-tserasera.
Fangalarana ny mombamomba ny hetra: mampiasa ny laharan'ny fiahiana ara-tsosialy anao mba handefasana tati-ketra sandoka.
Fangalarana famantarana ara-pitsaboana: mampiasa ny mombamomba anao mba hitadiavana tolotra ara-pitsaboana.
Fangalarana ny maha-asa: mangalatra ny mombamomba ny mombamomba ny toeram-piasanao hanaovana hetsika tsy ara-dalàna.
Fangalarana ny maha-zazakely: mampiasa ny mombamomba ny zanakao amin'ny hetsika tsy ara-dalàna.
Fangalarana ny maha-olon-dehibe: fangalarana ny mombamomba ny zokiolona noho ny heloka ara-bola.
Ahoana no hialana amin'ny halatra maha-izy azy
Jereo matetika ny kaontinao amin'ny banky mba hahazoana antoka fa tsy misy hetsika mampiahiahy.
Aza mitondra ny karatra fiahiana ara-tsosialy ao anaty poketrao.
Aza mizara ny mombamomba anao manokana sy ny sarinao amin'ny antoko tsy fantatra amin'ny Internet raha tsy hoe ilaina izany
Aza mampiasa tenimiafina mitovy amin'ny kaonty rehetra.
Mamorona tenimiafina matanjaka misy litera lehibe sy kely, isa, marika, sns.
Ampidiro ny fanamarinana roa lafin-javatra amin'ny kaonty rehetra anananao.
Ovay matetika ny tenimiafinao.
Mampiasà rindrankajy antivirus ahitana fiarovana ny halatra maha-izy azy.
Araho ny naoty momba ny bola sy ny fifampiraharahana mba hahitana izay mety ho famantarana hosoka.
Ny phishing dia iray amin'ireo tetika ara-teknika ara-tsosialy mahazatra ampiasain'ny mpanao heloka bevava mba hahazoana ny mombamomba anao manokana toy ny laharan'ny kaontin'ny banky, ny tenimiafina, sns. Ny hany zavatra tokony hataonao dia ny manindry rohy iray, saingy ampy hampidirana anao amin'ny fahasahiranana izany. . Rehefa angatahina hanamarina ny mombamomba ny kaontinao amin'ny banky an-tserasera, dia manoro hevitra ireo mpijirika mba hanindry rohy izay toa azo itokisana indrindra. Satria tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona ny fandrahonana tafiditra amin'ny fanindriana rohy na fanokafana rakitra nalefan'ireo mpandefa tsy fantatra, dia lavo izy ireo ary very ny volany.
Ahoana ny fiarovana ny tenanao amin'ny phishing
Mba hialana amin'ny phishing dia mila mitandrina amin'ireo rohy kitihinao ianao, ary diniho indroa raha hafatra ara-dalàna ilay izy. Sokafy ihany koa ny navigateur anao, midira mivantana amin'ny kaontinao amin'ny banky fa aza manindry ny rohy nalefan'ny mpandefa tsy fantatra.
Ransomware dia karazana malware manidy na manidy ny rakitrao sy ny antontan-taratasinao ary mitaky vola hamerenana azy ireo amin'ny endriny voalohany. Na dia misy fitaovana famadihana maimaim-poana aza, ny ankamaroan'ny niharam-boina dia aleony mandoa ny vidim-panavotana satria io no fomba haingana indrindra hivoahana amin'ny olana.
Ahoana ny fiarovana ny tenanao amin'ny Ransomware
Mba hialana amin'ny ransomware dia mila mitandrina tsara ianao amin'izay sokafanao sy tsindrio amin'ny alàlan'ny mailaka na tranokala. Tsy tokony hisintona mailaka na rakitra avy amin'ny mpandefa tsy fantatra na oviana na oviana ianao ary misoroka rohy sy doka mampiahiahy, indrindra rehefa mampandoa anao amin'ny serivisy izay maimaim-poana izy ireo.
Fanenjehana an-tserasera, Cyberstalking ary fampijaliana
Ny fanorisorenana an-tserasera sy ny fampijaliana an-tserasera dia miteraka heloka bevava an-tserasera marobe ary ny ankamaroany dia manomboka amin'ny fiantsoana anarana na fampijaliana an-tserasera, saingy mivadika tsikelikely amin'ny fanenjehana an-tserasera sy fandrahonana hamono tena. Araka ny filazan'ny Biraon'ny Fitsaràna Amerikana, ankizy 1 amin'ny 4 no iharan'ny fampijaliana amin'ny Internet. Ny fiantraika ara-psikolojika toy ny fahaketrahana, ny tebiteby, ny tsy fiheveran-tena ho an'ny tena, sns. no voka-dratsin'ireny heloka bevava ireny.
Ahoana no hijanonana ho voaro amin'ny fanorisorenana an-tserasera sy ny fampijaliana
Raha mahatsapa ianao fa misy manenjika anao amin'ny Internet, ny fanakanana azy ireo dia hanampy amin'ny fampitsaharana ny fanararaotana ary hisorohana ny fahavoazana bebe kokoa amin'ny fahasalamanao ara-tsaina.
Fadio ny mizara ny mombamomba anao manokana amin'ny olon-tsy fantatra amin'ny sehatra media sosialy sy amin'ny Internet.
Tohizo hatrany ny fanavaozana ny lozisialin'ny fiarovana anao ary ampiasao ny fanamarinana roa lafin-javatra hiarovana ny kaontinao.
Aza mamaly hafatra izay mahatonga anao tsy mahazo aina na mitebiteby, indrindra rehefa misy firaisana ara-nofo. Fafao fotsiny izy ireo.
Ny sehatra media sosialy toy ny Facebook, Instagram, Twitter, sns dia tsy milefitra amin'ny fanorisorenana na inona na inona amin'ny tranokalany ary azonao atao ny manakana olona iray amin'ireo tranonkala ireo mba tsy hahita ny hafany.
Fisolokiana sy Fisolokiana
Ny fivarotana an-tserasera dia fandraharahana mampanantena. Na izany aza, tokony hojerenao ireo mpisoloky sy mpisoloky izay maniry ny handefasanao vola ho azy ireo sy hanambara ny mombamomba anao manokana. Fomba fanao mahazatra amin'ny fisolokiana an-tserasera:
phishing: mandefa hafatra mody tranonkala ofisialy hangataka ny mombamomba anao na ny laharan'ny carte de crédit.
Fanohanana sandoka: ny hafatra dia toa avy amin'ny mpanjifa afa-po fa tena te hividy vokatra sy serivisy mety hanimba ny solosainao na ny mombamomba anao ianao.
Fisolokiana cryptocurrency: mangataka anao hampiasa vola amin'ny cryptocurrencies ary hamindra vola amin'ny kaontiny satria afaka mahazo tombony be izy ireo.
halatra famantarana: manolotra asa mitaky anao handoa vola mialoha ho an'ny fiofanana, olana visa, sns.
Soso-kevitra hialana amin'ny hosoka sy hosoka amin'ny Internet
Ampiasao ny fanamarinana 2-factor mba hiarovana ny kaontinao.
Araho maso ireo olona tsy te hihaona mivantana aminao alohan'ny fifampiraharahana.
Aza manambara ny mombamomba ny tena manokana raha tsy manana fahalalana ampy momba ilay olona na orinasa mangataka izany.
Aza mamindra vola amin'ny olona tsy fantatrao.
Aza matoky ny hafatra avy amin'ny olona milaza ho solontenan'ny serivisy mpanjifa raha mangataka ny mombamomba anao na ny nomeraon'ny carte de crédit ny hafatra.
Ny fampihorohoroana amin'ny cyber dia faritana ho fihetsika niniana hamorona tahotra miparitaka amin'ny alàlan'ny fanakorontanana, fahasimbana ara-toekarena, fatiantoka, sns amin'ny fampiasana solosaina sy Internet. Ireo heloka bevava ireo dia mety ahitana ny fandefasana fanafihana DDoS be dia be amin'ny tranokala na serivisy, fanodinkodinana fitaovana marefo amin'ny fitrandrahana vola crypto, fanafihana fotodrafitrasa manakiana (faritra herinaratra), sns.
Torohevitra hialana amin'ny fampihorohoroana an-tserasera
Ataovy azo antoka fa havaozina amin'ny kinova farany ny lozisialy fiarovanao, ny rafitra fiasanao ary ny fitaovana hafa.
Tandremo ny fihetsika mampiahiahy manodidina anao. Raha misy mahita ianao dia ampahafantaro avy hatrany ny mpitandro ny filaminana.
Fadio ny mampiasa tamba-jotra WiFi ho an'ny daholobe fa mora tratran'ny fanafihana toy ny fanafihana phishing sy man-in-the-middle (MITM) izy ireo.
Ampidiro ny angona saro-pady ary tehirizo an-tserasera araka izay azonao atao.
Ny ady an-tserasera dia endrika ady amin'ny fampahalalam-baovao atao any amin'ny habakabaka, toy ny amin'ny alàlan'ny Internet na tambazotra informatika hafa amin'ny fanjakana na fikambanana hafa. Izany dia azo atao amin'ny fampiasana ny fitsikilovana an-tserasera mba hanangonana faharanitan-tsaina, fampielezan-kevitra mba hitarihana ny vahoaka
Sarotra ny miatrika ny heloka an-tserasera satria mitranga amin'ny Internet izany. Vaovao ihany koa ary tsy maro ny firenena manana lalàna mazava momba izay azo atao amin'ireo tranga ireo, ka raha sendra trangan-javatra toy izao ianao dia mety tsara kokoa ny miresaka amin'ny mpisolovava alohan'ny handraisana fepetra!
Ireo mpisolovava mahay momba ny heloka an-tserasera ao amin'ny Amal Khamis Advocates and Legal Consultants any Dubai dia afaka manoro hevitra anao momba ny toe-javatra misy anao ary mitarika anao amin'ny dingana ara-dalàna. Raha manana fanontaniana mifandraika amin'ny Cybercrimes ianao dia mifandraisa aminay anio mba hifampidinika!